गायिका ज्योति मगर ! निकै भावुक हुदै भन्छिन्, मेरो रेट सोधिन्छ ! – Taja Khawar
गायिका ज्योति मगर ! निकै भावुक हुदै भन्छिन्, मेरो रेट सोधिन्छ !
प्रकाशित मिति: शनिबार, आषाढ १२, २०७८ समय: १५:०८:४०
लोक गायीका तथा कलाकार ज्याती मगरलाई निकै बिन्दास महिलाका रुपमा हेरिन्छ । उनी गायनमा मात्र नभएर नाचमा पनि उत्तिकै पारंगत छन् । उनले एक नाच प्रतियोगीमा
पनि निकै राम्रो प्रतिभा देखाइन् । उनी गीत गाउँदा संगै स्टेजमा नाच्छिन् । त्यसैले पनि उनको माग यस्ता कार्यक्रमहरुमा हुने गर्छन । तर निकै फरासिली र बोल्न नहिचकिचाउने ज्यातीले ब्यक्तिगत जिवनमा भने सोच्ने नसकेका घ-ट-ना भो-गे-की छन् । उनी महिला माथि इंकित गरेर बनाइएका कतिपय भनाई प्रति ज्योती सहमत छैनन् । भन्छिन्, एउटा घर राम्रो हुन महिलाको निकै राम्रो भूमिका हुन्छ भनिन्छ त्यो भनाई प्रति म सहमत छैन ।
पुरुषको कुनै जिम्मेवारी हुँदैन ? उनको प्रश्न छ । उनले आफु दागंवाट काठमाडौ आएर आफ्नो ब्यवसायीक जिवन सुरुवात गर्दाको अ-नु-भव-ले उनको आँखामा आँ-शु आयो ।
आफुलाई अलिकति भाग्यमानी भएको ठान्ने ज्योती आफु निडर भएका कारण हतोस्तसाही नभएको बताइन् । उनले भर्खर काठमाडौ आउँदा देखि नै काम
पाएका कारण आर्थिक रुपमा समस्या भोग्न नपरे पनि कामलाई न-रा-म्रो सो-चे-र आफु माथि राख्ने भनाईले कहिले काँही निकै चित्त दुखेको बताएकी छन् ।
महेन्द्र पुलिस क्लवमा कलाकारको कोटा खुलेको छ म सरकारी जागिर लगाइदिन्छु, दोहोरी साँझमा काम गरेको भनेर तिम्रो पछि सन्तानलाई पनि राम्रो ब्य-व-हा-र
हुँदेन भ-ने-र स-म्झा-ए । त्यसपछि उनी ति ब्यक्तिलाई भेट्न गइन् तर उनले आफुलाई होटल सम्म लगेर कोठा ब-न्द गर्न खोजेको विगत स-म्झि-ए-र निकै भावुक भइन् ।
याे पनि पढ्नुहाेस् :मिस नेपाल २०१९ अनुष्का श्रेष्ठ नेपाल फर्केकी छिन् । लण्डनमा भएको मिस वर्ल्ड २०१९ मा सहभागी जनाएर उनी सोमबार नेपाल
फर्किएकी हुन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै अनुष्काले विश्व सुन्दरी प्रतियोगितामा सहभागी भएर नेपाल फर्किँदा खुशी
लागेको बताइन् ।‘देशका लागि ३ वटा अवार्ड लिएर आउँदा खुशी लागेको छ, टिमको मेहनतलाई दर्शकले साथ दिँदा ह्याप्पी छु,’ अनुष्काले भनिन् ।
अनुष्काले मिस वर्ल्डको स्टेजमा पाएको सम्मान सबै नेपालीका लागि भएको बताइन् । साथै उनले नेपालबारे अरुलाई पनि जानकारी गराएको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘धैरेलाई नेपाल भनेको सगरमाथाको देश भन्ने थाहा रहेछ, मैले नेपालको प्राकृतिक पक्षलाई पनि चिनाउने कोशिश गरेँ ।’मिस नेपाल २०१९ बनेपछि
अनुष्काले ‘पर्यटन वर्ष २०२०’ को प्रचार गर्दै आएकी थिइन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि आफ्नो देशको प्रतिनिधित्व गर्दै पोस्ट गरेकी थिइन् । अनुष्काले मिस वर्ल्डमा सहभागी जनाउँदाको यात्रा निकै रमाइलो रहेको बताइन् ।
यसलाई एक महत्त्वपूर्ण क्षणका रुपमा लिएको समेत उनले बताइन् । ‘कडा मेहनत र साथीको साथले जित्न सजिलो हुनेछ,’ उनले भनिन् । मिस वर्ल्डको प्रतिस्पर्धामा नेपालका तर्फबाट सहभागिता जनाउन पाउँदा आफू खुशी भएको र सबैको साथ र टिमवर्कले नेपालको सहभागिता सम्मानजनक भएको अनुष्काले बताइन्‘विदेशी धेरैले नेपाल कत्रो छ भनेर सोध्नुहुन्थ्यो,
Last Updated on: June 26th, 2021 at 3:08 pm
२६६ पटक हेरिएको